XOG: Villa Somalia oo 2-arrin darteed u dabcisay cadaadiskii ay ku heysay mucaaradka -News and information about Somalia
Home Warkii XOG: Villa Somalia oo 2-arrin darteed u dabcisay cadaadiskii ay ku heysay...
XOG: Villa Somalia oo 2-arrin darteed u dabcisay cadaadiskii ay ku heysay mucaaradka
Warar hoose oo aan heleyno ayaa sheegaya in Madaxtooyada Soomaaliya ay dabcisay cadaadiskii ay ku heysay mucaaradka kadib markii cirka isku sii shareeray cadaadiska ka dhanka ah dowladda.
Taliyaha Sirdoonka Soomaaliya, Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, oo saameyn ku leh dowladda madaxweyne Farmaajo, ayaa bilooyinkii lasoo dhaafay wadday kulamo lagu qaboojinayo xiisadda kacsan.
Fahad Yaasiin ayaa maalmihii u dambeeyay u waday kulamo uu la qaadanayay siyaasiyiinta mucaaradka,xittaa wuxuu la kulmay wariyeyaasha madaxa banaan oo uu ka dalbaday in aysan tabin wararka xubnaha ka aragtida duwan xukuumada federaalka.
Xubno ka tirsan Xisbiga UPD ee uu hoggaamiyo Xasan Sheikh Maxamuud ayaa inoo xaqiijiyay inuu la kulmay Taliyaha Nabad Sugida Fahad Yaasiin,isagoo kala hadlay iney u tafaxeetaan taageerida Xukuumadda Soomaaliya.
Kulankii u dambeeyay, Shariif Sheekh Axmed ayuu la qaatay. Is-aragga oo ka qabsoomay hoyga madaxweynihii 7aad ee Soomaaliya ee Muqdisho, waxaa ka horeeyay wada hadal telefoonka ah.
Sidda ay qortay warbaahinta, Shariif ayaa iska diidey codsi kaga yimid Farmaajo kaasoo ahaa in ay wada hadalo yeeshaan.
Mudadii uu socday shirka, waxaa lagu lafaguray dhacdooyinkii u dambeeyay ee mucaaradka kala kulmay dowladda, qaabkii loo xalin lahaa iyo tabashadooda. Ma jiro go’aan ay isla qaateen.
Madasha Xisbiyada qaran ayaa sheegay inuu bur buray heshiiskii dhexmaray Madaxtooyada Soomaaliya iyo Madasha,kaas oo looga hadlayay xaaladda dalka iyo dhibaatooyinka lagu haayo mucaaradka.
Previous articleXOG: Maxaa hoose loogu dhigay Awooddii Saadaq Joon ee gobolka Banaadir?+(Cadeyn)
Next articleCiidamo xoogga oo la wareegay deegaano ka tirsan Bay
Taabid Cabdi Oo Xayiraadii Sheekh Shariif Ku Tilmaamay Arrin Fajac Ah